बगाले थापा समाज धवलागिरिको अध्यक्षमा भीमबहादुर थापा चयन ! – ebaglung.com
२०७५ आश्विन २९, सोमबार १६:१७	Top News, थप समाचार
म्याग्दी २०७५ साउन २९ । बगाले थापा समाज धौलागिरीको नवौं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनले भीमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा राज थापा, सचिवमा रीमप्रकाश थापा कोषाध्यक्षमा मिठु थापा र सहसचिवमा सन्तोष थापा चयन भएका छन् ।
समाजका सदस्यमा डा. दिनबहादुर थापा, तप्तबहादुर थापा, लक्ष्मी थापा, रेशमबहादुर थापा र तेजेन्द्र थापा चयन भएका छन् । लेखा समितिको संयोजकमा किरण थापा चयन भएका छन् भने सल्लाहाकार समितिको संयोजकमा तमबहादुर थापा र सदस्यमा दुर्गबहादुर थापा, कृष्णबहादुर थापा, विष्णुप्रकाश थापा, थम्मनसिंह थापा, डा. बुद्धिबहादुर थापा र कृष्णबहादुर थापा रहेका छन् ।
यस्तै अधिवेशनले नानु थापाको संयोजकत्वमा महिला उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिको सचिवमा शर्मिला थापा र शान्ति थापा रहेका छन् । यस्तै निसान पूजा व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा होमबहादुर थापा, सदस्यमा काजी यामबहादुर थापा, अर्जुन थापा, ओमबहादुर थापा चयन भएका छन् ।
पोखरा सम्पर्क समितिको संयोजकमा खड्क थापालाई जिम्वेबारी तोकिएको छ । यस्तै काठमाडौं, भैरहवा, जापान, बेलायत लगाएतका स्थानमा सम्पर्क समिति बनाइने सचिव राज थापाले जानकारी दिए । साधारण सभा तथा अधिवेशन गत शनिबार बगाले थापाहरुको कुलपितृ तीर्थस्थल म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपाािलका–७ ताकम, धारापानीमा सम्पन्न भएको थियो ।